Ezona ncwadi zintle zoncwadi lwaseLatin American | Uncwadi lwangoku
Uncwadi lwaseLatin American luhlala lubonisa eyona miba yomlingo kunye neyohlukileyo. Ichazwe ubukhulu becala yinto ebizwa ngokuba yi "Latin American boom" yee-60s ezafumana eyona nto ingummeli wayo kwimilingo, elinye icala ledama lifumana kwezi Ezona ncwadi zibalaseleyo kuncwadi lwaseLatin American Abameli abalungileyo xa kufikwa kumba wokungena kula mabali abantu abalahlekileyo, abalinganiswa ababodwa kunye nokugxekwa kwezopolitiko.
1 Imibongo engamashumi amabini yothando kunye nengoma enomdla, kaPablo Neruda
2 UPedro Páramo, nguJuan Rulfo
5 Ubukumkani beli hlabathi, ngu-Alejo Carpentier
6 IHopscotch, nguJulio Cortázar
7 Itheko lebhokhwe, nguMario Vargas Llosa
8 Njengamanzi etshokholethi, nguLaura Esquivel
9 Ubomi obufutshane obumangalisayo buka-Óscar Wao, nguJunot Díaz
UGabriel García Márquez wathi ngaye yayingu «imbongi ebalaseleyo yenkulungwane yamashumi amabini«, Kwaye ngokuhamba kwexesha, siyakholelwa ukuba khange iphazame. Uzalelwe eChile, eNeruda Upapashe le mibongo yothando engamashumi amabini kunye nengoma enomdla eneminyaka nje eyi-19 ukusebenzisa ngokungagungqiyo ivesi yaseAlexandria kunye nokubandakanya umbono wakhe wothando, ukufa okanye indalo kwiivesi. Ngonaphakade kuhlala amazwi akhe kunye nobomi obuxubeneyo be Ngo-1963 Umvuzo weNobel kwiNcwadi.
UPedro Páramo: 189 ...
Emva kokupapashwa kweseti yokuqala yamabali abizwa ngokuba ngu-El llanero en llamas, uMexico waseJuan Rulfo wanceda ukubeka iziseko ubunyani bomlingo Enkosi kule noveli yokuqala yapapashwa ngo-1955. Ebekwe eComala, idolophu ekwintlango yaseColima, eMexico, uPedro Páramo uphendula igama likatata uJuan Preciado wafika efuna indawo ethe cwaka. Enye yeencwadi ezithengisa kakhulu kwiLatin American embalini, ikwayimbali yexesha, leyo yeminyaka yasemva kohlaziyo lwaseMexico.
Iminyaka elikhulu yokuba wedwa ...
Ephefumulelwe ngumsebenzi kaRulfo, uGabo waqala ukunyuka nge-50s eyayiza kuphelela ekupapashweni (kunye nakwimpumelelo) ngo-1967 kwi-One Hundred Years of Solitude, mhlawumbi owona msebenzi unempembelelo kwiLatin American kwinkulungwane yama-XNUMX. Amathambo eli lizwekazi afana noMzantsi Melika afakwa kwisitampu somlingo saseMacondo, idolophu yaseColombia apho Usapho lakwaBuendía kunye nezizukulwana zabo ezahlukileyo bakhonza ukubalisa amabali wothando, ubukhosi kunye notshintsho oluchaza enye ye iinoveli zinamandla kakhulu kuncwadi jikelele.
Ipapashwe ngo-1982, Inoveli yokuqala ka-Isabel Allende, umbhali owafuduka kwelakowabo i-Chile ngethuba lolawulo lolawulo lobuzwilakhe, waba ngoyena mntu uthengisa kakhulu kwaye kumnyhadala wokulungiswa kwefilimu owakhutshwa ngo-1994. yobomi kunye nelishwa lezizukulwana ezine zosapho lakwa-Trueba kumaxesha oxinzelelo e-Chile yasemva kobukoloniyali. Abalinganiswa abanokuqikelela, ukungcatsha kunye nokuthandana bachaza iChile umbhali azame ukuyenza kwimisebenzi yakhe emininzi.
Ubukumkani beli hlabathi ...
Emva kweminyaka eliqela eYurophu, uCarpentier wafaka ebhegini yakhe iimpembelelo zokuzithemba ezenziwa xa wayefika kwilizwe lakhe laseCuba kunye neminyhadala ye-voodoo yaseHaiti ekufuphi yakhuthaza ubukho eyona nto imangalisayo, umbono othi nangona ufana nezinto eziyinyani zomlingo, wahlukile. Ubungqina beli bali libaliweyo esixelelwa lona Ubukumkani beli Hlabathi, ibali elibekwe kwikoloniyali yaseHaiti ibonwa ngamehlo ekhoboka uTi Noél kunye nenyani apho ukudibana okungalindelekanga kunye namandla angaphezu kwendalo nobomi bemihla ngemihla behlabathi elingenabulungisa .
Iyaqwalaselwa ngabaninzi njenge «antinovela«, Okanye« contranovela »NgokukaCortázar ngokwakhe, uHopscotch ugqithisela imidlalo yobuntwana ezindala kumaphepha encwadi apho umlingo, uthando kunye nohlobo olwahlukileyo luyinto yokulalisa ngomlingo. Ngelixa kuchazwa iyelenqe leHopscotch (phantse) akunakwenzeka ubume bayo obukhethekileyo kunye nesitayile esiguqukayo, Enye yeenoveli zokuqala ze-surrealist kwiincwadi zase-Argentina, zilandela iinyawo zikaHoracio Oliveira ngokusebenzisa i-cosmos eyayiyi-Cortázar eyayiza kuhlanganisa phantsi kwesihloko seMandala. Umbono wawusoloko ungowokuphanga izixhobo zomfundi.
Itheko lebhokhwe, nguMario Vargas Llosa
Itheko lebhokhwe ...
Nangona umbhali wasePeru-Spain enezinto ezingaphezulu kwamashumi amabini ezikumgangatho ophezulu kwimisebenzi yakhe yokuthenga ngetyala, iLa fiesta del chivo inyamezeleka ngenxa yobume bayo obucacileyo kunye nomsebenzi olungileyo wombhali njengoko esazisa kwesinye seziganeko zobupolitika ezimnyama eLatin America: ulawulo lobuzwilakhe lukaRafael Leónidas Trujillo kwiRiphabhlikhi yaseDominican. Yahlulwe yangamabali amathathu kunye neembono ezimbini ezahlukeneyo, inoveli epapashwe ngo-2000 ibhekisa kwimpembelelo yolawulo oluzinzileyo namadoda aphoswa kookrebe, amantombazana agutyungelwe ngamandla okanye unxano lokuziphindezela emva kwelenqe lokubulala elihleli ngo-1961.
Xa ubugqi bokwenyani babonakala ngathi butshintshile baba yimisinga emitsha, kwafika uLaura Esquivel waseMexico enencwadi enempumelelo yayo esebenzisa ezona zithako zintle zokwenza umhlaba uthandane: Ibali lothando elingenakwenzeka, ophambili ekhokelwa ngumpheki wosapho kunye neMexico yemveli kunye nenguquko apho intelekelelo kunye nenyani zihlala ngokulinganayo. Uloyiso ngokupheleleyo.
Ubomi obufutshane obumangalisayo buka-Óscar Wao, nguJunot Díaz
Ubomi obufutshane obumnandi ...
Kuyo yonke le nkulungwane yama-2007, uninzi lweyona misebenzi mihle yaseLatin American yeza isuka eUnited States ukusikhanyisela ngobunyani be-diaspora. Owona mzekelo ubalaseleyo ngulowo wombhali uJunot Díaz kunye nencwadi yakhe ethi The Wonderful Brief Life ka-Escar Wao, ejongene nobomi bosapho lwaseDominican olwasekwa eNew Jersey kwaye, ngakumbi, i-nerd encinci amantombazana ayengayifuni kunye nehlobo eSanto Domingo yayisisityhilelo esibi. Ipapashwe ngo-XNUMX, incwadi iphumelele iPulitzer Prize Kwaye wathweswa isithsaba # 1 kwiNew York Times iiveki ezimbalwa.
Emva koko Ukusweleka kombhali waseChile uRoberto Bolaño ngo-2003Inoveli eyahlula-hlulwe ngezavenge ezintlanu yacwangciswa njengendlela yokuxhasa usapho lombhali. Okokugqibela, zonke zapapashwa kwincwadi enye ebekwe kwisixeko esintsomi saseMexico iSanta Teresa, esinokuba siso UCiudad Juárez. Imanyene ngokubulawa kwabasetyhini abahlukeneyo, i-2666, njengeminye imisebenzi enje ngabaphenyi beSavage guqula umbhali abe lilivo kwaye uqinisekise ngokutshintsha kweeleta ezithile zeSpanishi zikwimeko yobabalo.
Zeziphi ezona ncwadi zibalaseleyo zoncwadi lwaseLatin American kuwe?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Ezona ncwadi zibalaseleyo kuncwadi lwaseLatin American
Ingcaciso encinci, "yiThafa eliVuthayo" hayi i "The Llanero ..."
Phendula uOscar Hernández
UMaria scott sitsho
Ndingathanda ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga nokuba ndingazithenga phi iincwadi ePhoenix Arizona
Molo Maria Scott. Ungazithenga iincwadi kwiAmazon, apho ufumana uninzi lwababhali baseLatin American ngesiNgesi okanye ngeSpanish. Ukubulisa.
UScott Bennett sitsho
Enkosi ngokwabelana ngoluhlu. UPablo Neruda waphumelela uMvuzo weNobel woNcwadi ngo-1971, hayi ngo-1963.
monserrat ngakumbi sitsho
U-Octavio Paz, uCarlos Fuentes kunye noGaleano balahlekile… ..
Phendula kwimonserrat moreno
«Incoko kwiCathedral» nguMario Vargas Llosa….
Ulahlekile isityalo sam se-orange-lime kunye nencwadi yeGaleano
UMarta Palacios sitsho
Ingcebiso entle! Ndingongeza inoveli esandula ukupapashwa: "Kuphela ukwanga okuza kugquma imilomo yethu" ngumbhali waseArgentina uHernán Sánchez Barros. Intsomi ebaliweyo ngokwenene.
Akukho namnye ovela ku-Octavio Paz okanye uCarlos Fuentes?
Akunangqondo ukuba uJunot Díaz obhala ngesiNgesi avele kuluhlu kwaye akukho maBrazil, Haitian, njl. I-Latin America phantse ingcaciso yeelwimi: iSpanish, isiFrentshi, isiPhuthukezi esivela eMelika. Ukuba ngunyana weDominican okanye iBrazil ayikwenzi iLatin American.
BCNegra 2018. Ushicilelo olutsha loMnyhadala weNoveli eMnyama. NgoJanuwari 29 ukuya kuFebruwari 4